प्रविधिको आधुनिक युगमा, थप र थप मान्छे दृष्टि समस्या छ। चश्मा, संपर्क लेंस वा सर्जरी: त्यहाँ आफ्नो सुधार धेरै तरिकाहरू छन्। दुर्भाग्यवश, सञ्चालन - यो एकदम महंगा खुशी छ, र चश्मा सधैं सुविधाजनक छन्। त्यसैले, सबै भन्दा राम्रो उपाय दृष्टि सुधार को लागि - लेन्सको। यस लेखमा हामी लेंस फोकस Dailies सबै दिन आराम, विवरण र समीक्षाहरू, साथै आफ्नो सकारात्मक र नकारात्मक गुणहरू छलफल हुनेछ।
लेंस फोकस Dailies सबै दिन आराम - डिस्पोजेबल प्लास्टिक कुनै पनि मर्मतका आवश्यक नगर्ने, एक दिन को लागि उत्पादन हो। हरेक दिन, तपाईं लेंस को एउटा सफा, ताजा जोडी प्रयोग गर्नुहोस्। तिनीहरूले निर्जलीकरण उच्च लोच र प्रतिरोध छ जो एक सामाग्री बनेको छन्।
लेंस, नवीनतम प्रविधि प्रयोग गरेर चिल्लो किनाराको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न, तिनीहरूलाई लगाउन सहज बनाउन निर्मित छन्। नयाँ को elastomeric सामाग्री जो देखि लेन्स (nelfilkon एक) संग, र तिनीहरूले कोमलता र लोच साथ अधिकार। ध्यान Dailies लेंस अन्य कम्पनीहरु को बहुलक उत्पादनहरु को दिन भन्दा त्यो लगभग 50% पतली आरामदायक किनारा छ। को कर्निया आँखा निरन्तर अक्सिजन आवश्यक छ, त्यसैले लेन्स प्रोफाइल आफ्नो आँखा गर्न निरन्तर पहुँच प्रदान गर्दछ। यो पनि लेन्स सजिलै लोचदार सामाग्री को एक किसिम मार्फत manipulated छ उल्लेख गर्नुपर्छ।
लेंस फोकस Dailies धेरै सहज छन्। तिनीहरूले पूर्ण एक पटल एक न्यूनतम सम्पर्क को लागि, दिन को समयमा आँखा अक्सिजन लागि आवश्यकता पूरा गर्न र प्रयोग समयमा अधिकतम सुविधा प्रदान गर्नुहोस्। यी लेंस को अर्को महत्वपूर्ण विशेषता breathability छ।
एक-दिन संपर्क लेंस Dailies गर्ने कम्तीमा केही दृष्टि समस्या सबै मानिसहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ध्यान दिनुहोस्। तिनीहरूले प्रयोग गर्न धेरै सुविधाजनक छन्, र धेरै महत्वपूर्ण कुरा, तिनीहरूले मर्मतका आवश्यक छैन। त्यसैले, तपाईं विशेष कन्टेनर र समाधान किन्न आवश्यक छैन। तपाईं बस, बिहान लेन्सको राख्नु एउटा सुन्दर दृष्टि बस टाढा प्रयोग फेंक सबै दिन र रात रमाइलो गर्न आवश्यक छ। अर्को बिहान, तपाईं नयाँ सफा जोडी पर्खिरहेका छन्। तपाईं 90 लेंस, वा 60, आफ्नो रुचि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ फोकस Dailies सबै दिन आराम।
तपाईंको दृष्टि थियो स्वस्थ आँखा स्थिर hydration आवश्यक छ। धन्यवाद नयाँ प्रविधि एक्वा सुविधा आफ्नो आँखा मा सबै दिन लामो अधिकतम wetted र त्यहाँ सूक्खापना र जलन को कुनै भावना छ। र धन्यवाद पनि पोलीविनायल रक्सी (PVA) लेंस सुविधाजनक र आरामदायी हुन्छ प्रयोग गर्नुहोस्। microflora पूर्ण भएको PVA संग आँखा पछि। यो कि आँखा गर्न गीला घटेको र अन्य लागूपदार्थको पनि एक biocompatible सामाग्री समावेश उल्लेख गर्नुपर्छ।
ध्यान Dailies लेंस धेरै राम्रो संरचना छ। विधि हल्का प्रौद्योगिकी यो सिर्जना गर्न प्रयोग भएको थियो। त्यसैले, तपाईं साँच्चै तपाईं को सामने त्यहाँ एक विदेशी शरीर छ भन्ने भूल र बस सिद्ध दृष्टि आनन्द।
यसलाई कसरी तपाईं को लागि उपयुक्त र उपयुक्त लेन्स चयन गर्न अघि, तपाईं एक विशेषज्ञ परामर्श आवश्यक छ कि सम्झना हुनुपर्छ। यो नेत्र रोग विशेषज्ञ दृष्टि समस्या पहिचान र तिनीहरूलाई समाधान गर्न सुझाव प्रदान गर्दछ मदत गर्नेछ छ।
एक-दिन संपर्क लेंस को लाभ
एक-दिन लेंस अन्य प्रकार संग तुलना धेरै लाभ छ:
कारण यस्तो उत्पादनहरु एक पारंपरिक लेन्स (राता, जल) प्रयोग गर्दा देखा पर्न सक्छ जो आँखाले विभिन्न समस्या जोगिन सक्छौं।
क्षणिक तिनीहरूले मर्मतका आवश्यक छैन देखि, समाधान र हेरविचार को अन्य साधन मा निहित छन् रसायन संग सम्पर्क छैनन्। यो पनि लेन्स पहिलो आँखा मा राखिएको छ जब समय, यो पदार्थ को एक किसिम सञ्चय कि उल्लेख गर्नुपर्छ। यी जम्मा मात्र हेरविचार र disinfection बावजुद जम्मा हुनेछ। एक एक-दिन लेंस, यो समस्या सामना छैन।
एक-दिन बहुलक उत्पादनहरु प्रयोग गर्दा थप कन्टेनर र हेरविचार को अन्य साधन पैसा खर्च गर्न आवश्यक छैन।
लेन्स फोकस Dailies आँखा मा विदेशी शरीर अनुभूति कारण छैन। त्यसको विपरीत, तिनीहरू धेरै हल्का र लगभग अदृश्य छन्।
एक-दिन लेंस को मूल्य
धेरै आफ्नो मूल्य र मात्र मुख्य drawback अनुसार, जो दृष्टि समस्या र एक-दिन यो ठीक गर्न प्रयोग लेंस छ मान्छे। तिनीहरू साँच्चै एकदम महंगा छन्। तर हामी त्यसैले यसलाई गुणस्तर उत्पादनहरु किन्न आवश्यक छ, यो स्वास्थ्य बचत गर्न असम्भव छ भनेर सम्झना गर्नुपर्छ। दिन लेंस फोकस Dailies सबै दिन आराम 90 एकाइहरु 2,000 rubles देखि खर्च हुनेछ। मूल्य बरु ठूलो, तर तपाईं लेन्स हेरविचार लागि कन्टेनर, समाधान, चिमटी र अन्य उपकरण खरीद मा बचाउने भूल छैन।
यस लेखमा हामी एक-दिन लेंस फोकस Dailies सबै दिन आराम, विस्तृत छलफल आफ्नो विशेषताहरु भेटे। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, अल्पकालिक पारंपरिक संपर्क लेंस तुलनामा धेरै लाभ छ। तपाईं एक उपयुक्त एक-दिन लेंस चयन गर्न आफ्नो डाक्टर संग परामर्श गर्न निश्चित हुनुहोस्। यी उत्पादनहरूको मात्र drawback आफ्नो लागत छ। तर तपाईं मात्र सबै भन्दा राम्रो गुणवत्ता र सबै भन्दा राम्रो उत्पादन योग्य भनेर, त्यसैले आफ्नो स्वास्थ्य मा skimp छैन, र सिद्ध, उच्च गुणस्तरीय दृष्टि आनन्द सम्झना!
रोकथाम आँखा दबाव - लक्षण गायब
Soflens दैनिक डिस्पोजेबल - यो मूल्य खरीद छ?
Pupils dilated किन: कारणहरू र नतिजा
सम्पर्क लेन्स Adore - आफ्नो आँखा चमक गर्न!
Lukas Maykl दाऊदले: एक जीवनी, क्यारियर, फोटो
साइट को परिदृश्य मा रेत र बजरी मिश्रण
Aleksandra Ayvi। चक्र "युगयुगका संरक्षक"
नियन्त्रण बटनबाट सञ्झ्याल अपरेसन
Freesias को विवाह फूलगुच्छा दुलही को सौन्दर्य जोड
"Dolobene": प्रयोग, सङ्केत गर्छ र contraindications लागि निर्देशन
चिकन - व्यञ्जनहरु